ယူနိုကျတကျနဲ့ သရကေခြဲ့ပွီးနောကျ လီဗာပူးကွယျပှငျ့တှကေို သတိပေးမှု လုပျခဲ့တဲ့ ယာဂနျကလော့ - SPORTS MYANMAR
ယူနိုကျတကျနဲ့ သရကေခြဲ့ပွီးနောကျ လီဗာပူးကွယျပှငျ့တှကေို သတိပေးမှု လုပျခဲ့တဲ့ ယာဂနျကလော့
ယာဂနျကလော့ က ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီရဲ့ အခကျခဲဆုံး အပိုငျး မလာသေးဘူးလို့ သူ့ရဲ့ လီဗာပူး အသငျးသား တှကေို သတိပေး သှားခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူးဟာ အမွငျ့ဆုံး ရနိုငျတဲ့ အမှတျ ၂၇ မှတျ ကနေ ၂၅ မှတျထိ စုဆောငျး ထားနိုငျခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့ထကျ တဈပှဲပို ကစား ထားခဲ့တဲ့ လကျရှိ ခနျြပီယံ မနျစီးတီး အသငျးထကျ ၃ မှတျ အသာ ဇယားထိပျမှာ ဦးဆောငျ နပေါတယျ။
လီဗာပူး တို့ ခွခြေျောခဲ့တဲ့ တဈခုတညျးသော ပှဲကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ တဈပတျက မနျခကျြစတာ ယူနျိုကျတကျ နဲ့ အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ သရကြေ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ ဖွဈပွီး The Reds တို့ဟာ သရေ တဈမှတျ အတှကျ လူစားဝငျ ကစားသမား အဒမျလယျလာနာ ရဲ့ နောကျကဂြိုးကို လိုအပျ ခဲ့ပါတယျ။ ကလော့ရဲ့ အသငျးဟာ ဒီရာသီ အာဆငျနယျ ၊ ခြဲလျဆီး တို့ကို အနိုငျ ကစားထား ခဲ့ပွီး ရှမှေ့ာ ခွခြေျော သှားနိုငျတဲ့ ပှဲတှေ အဖွဈ နိုဝငျဘာမှာ စီးတီး နဲ့ အနျဖီး မှာ ကစား ရမယျ့ ပှဲရှိနသေလို ဒီဇငျဘာမှာ အဲဗာတနျ နဲ့ မာဆေးဆိုကျ ဒါဘီလညျး ရှိနပေါတယျ။
လီဗာပူး အသငျး ပရိတျသတျတှေ ကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ နောကျပိုငျး ဝေးကှာ နတေဲ့ အမှတျပေးဇယားကို ဆှတျခူးနိုငျရနျ အလှနျ စိတျအား ထကျသနျ နကွေ ပါတယျ။ ဂြာမနျနညျးပွ ကတော့ သူ့ရဲ့ အသငျး ဒီရာသီ မှာ အကောငျးဆုံး ရလဒျတှေ ပိုငျဆိုငျ ထားပမေယျ့လညျး ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ဟာ သူ့ခေါငျးထဲမှာ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုလိုကျ ပါတယျ။
ကလော့ က “No ပါ။ ကြှနျတျော ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကို အိမျမကျမကျ မနပေါဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျ ဖိုငျနယျ တုနျးကလညျး အိမျမကျမကျ မနခေဲ့ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ဒီဖလား ဆှတျခူး နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ဒီအတှကျ အလုပျလုပျ ရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ ရာသီ အစပိုငျးမှာ အားလုံး ထငျထားတာထကျ ပိုကောငျးတဲ့ နရောမှာ ရှိနပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကြျောဖွတျ နိုငျခဲ့ပွီလား? No ပါ။
ကြှနျတျောတို့ အခုထိ ဖနျတီးထားခဲ့ တာကတော့ တကယျ့ အခွခေံကောငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ အခွခေံပွီး အလုပျလုပျ သှားရမယျ့ အရာပါ။ အခကျခဲဆုံး ကာလတှေ ဖွဈတဲ့ နိုဝငျဘာ ၊ ဒီဇငျဘာလတှေ ရောကျလာတော့မှာ ဖွဈပွီး ရူးလောကျအောငျ ကစား သှားရမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ တဈခြို့ အခိုကျအတနျ့ တှမှော ကံကောငျးဖို့ လိုပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အရာအားလုံး အပျေါ မလှမျးမိုး နိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ တကယျ့ ပှဲတှမှော တဈကယျ့ ပုံစံကောငျးကို ပွသနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ လုပျသှား ရမယျ့ အရာပါ။
ကြှနျတျောတို့ ဆုဖလား အတှကျ တိုကျပှဲဝငျ သှားရမှာပါ။ ဘာမှ အာမခံလို့ ရတာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ အပွငျ အခွား အသငျးတှေ ကိုလညျး အိမျမကျမကျလို့ ရစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အားလုံး အလုပျတော့ လုပျသှား ရမှာပါ။’ လို့ ပွောခဲ့ ပါတယျ။
ကလော့နဲ့ လီဗာပူး အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက စှမျးဆောငျမှုတှေ အတှကျ ဂုဏျယူ နရေမှာ ဖွဈပမေယျ့ ဒါဟာ အတိတျက အမှတျတရသာ ဖွဈပွီး အနာဂတျ အောငျမွငျမှုတှေ ရဖို့ အတှကျ ဒီအပျေါမှာ ပိတျမိနလေို့ မရပါဘူး။
လီဗာပူးတို့ ၆ ကွိမျမွောကျ ဥရောပ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျခဲ့တဲ့ အပျေါ ကလော့ က “ဒါဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ အမှတျတရ ဖွဈပွီး အံ့ဖှယျကောငျးကာ ကွီးကွယျလှ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ သမိုငျးကွောငျးပါ။ ဒါဟာ ဘဝရဲ့ အကောငျးဆုံး အပိုငျးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမှ ပွောငျးလဲလို့ မရတော့ ပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့ ဘဝရဲ့ အကောငျးဆုံး နှရောသီလို့ ဆိုနိုငျ ပါတယျ။
ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ မှာ ခကျခဲမှု ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယုံကွညျမှုဟာ ဘယျလောကျ အရေးပါသလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ သိထားပွီး ကိုယျလုပျတဲ့ အရာတှေ အလုပျ ဖွဈတဲ့ အခါ ဒီယုံကွညျမှုကို ရပါတယျ။ မနှဈကတော့ အလုပျ ဖွဈခဲ့ ပါတယျ။ ကောငျလေးတှဟော ဒီရာသီကို မတူညီတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ စတငျ ခဲ့တာ ဖွဈပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပိုပွီး ယုံကွညျ လာပါတယျ။ ကြှနျတျော ကတော့ အသငျးဟာ ဒီအပိုငျးမှာ အမြားကွီး တိုးတကျ လာနိုငျသေးတဲ့ အပိုငျးတှေ ရှိနေ သေးတယျလို့ ယူဆ နဆေဲပါ။” လို့ ပွောသှား ပါတယျ။
လီဗာပူးဟာ ကွားရကျက ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစု တတိယမွောကျ ပှဲစဉျမှာ ဂနျ့ အသငျးကို ၄-၁ နဲ့ နိုငျကာ ၃ မှတျ ရရှိ ခဲ့ပွီး ယနညေ့ မှာတော့ တော့တငျဟမျ နဲ့ အိမျကှငျးမှာ ပှဲကပျြ ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ယူနိုက်တက်နဲ့ သရေကျခဲ့ပြီးနောက် လီဗာပူးကြယ်ပွင့်တွေကို သတိပေးမှု လုပ်ခဲ့တဲ့ ယာဂန်ကလော့
ယာဂန်ကလော့ က ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီရဲ့ အခက်ခဲဆုံး အပိုင်း မလာသေးဘူးလို့ သူ့ရဲ့ လီဗာပူး အသင်းသား တွေကို သတိပေး သွားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ အမြင့်ဆုံး ရနိုင်တဲ့ အမှတ် ၂၇ မှတ် ကနေ ၂၅ မှတ်ထိ စုဆောင်း ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထက် တစ်ပွဲပို ကစား ထားခဲ့တဲ့ လက်ရှိ ချန်ပီယံ မန်စီးတီး အသင်းထက် ၃ မှတ် အသာ ဇယားထိပ်မှာ ဦးဆောင် နေပါတယ်။
လီဗာပူး တို့ ခြေချော်ခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပွဲကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ သရေကျ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ဖြစ်ပြီး The Reds တို့ဟာ သရေ တစ်မှတ် အတွက် လူစားဝင် ကစားသမား အဒမ်လယ်လာနာ ရဲ့ နောက်ကျဂိုးကို လိုအပ် ခဲ့ပါတယ်။ ကလော့ရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရာသီ အာဆင်နယ် ၊ ချဲလ်ဆီး တို့ကို အနိုင် ကစားထား ခဲ့ပြီး ရှေ့မှာ ခြေချော် သွားနိုင်တဲ့ ပွဲတွေ အဖြစ် နိုဝင်ဘာမှာ စီးတီး နဲ့ အန်ဖီး မှာ ကစား ၇မယ့် ပွဲရှိနေသလို ဒီဇင်ဘာမှာ အဲဗာတန် နဲ့ မာဆေးဆိုက် ဒါဘီလည်း ရှိနေပါတယ်။
လီဗာပူး အသင်း ပရိတ်သတ်တွေ ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ဝေးကွာ နေတဲ့ အမှတ်ပေးဇယားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရန် အလွန် စိတ်အား ထက်သန် နေကြ ပါတယ်။ ဂျာမန်နည်းပြ ကတော့ သူ့ရဲ့ အသင်း ဒီရာသီ မှာ အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေ ပိုင်ဆိုင် ထားပေမယ့်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ဟာ သူ့ခေါင်းထဲမှာ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
ကလော့ က “No ပါ။ ကျွန်တော် ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို အိမ်မက်မက် မနေပါဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် တုန်းကလည်း အိမ်မက်မက် မနေခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒီအတွက် အလုပ်လုပ် ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရာသီ အစပိုင်းမှာ အားလုံး ထင်ထားတာထက် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျော်ဖြတ် နိုင်ခဲ့ပြီလား? No ပါ။
ကျွန်တေ်ာတို့ အခုထိ ဖန်တီးထားခဲ့ တာကတော့ တကယ့် အခြေခံကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အခြေခံပြီး အလုပ်လုပ် သွား၇မယ့် အရာပါ။ အခက်ခဲဆုံး ကာလတွေ ဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၊ ဒီဇင်ဘာလတွေ ရောက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ရူးလောက်အောင် ကစား သွားရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တစ်ချို့ အခိုက်အတန့် တွေမှာ ကံကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရာအားလုံး အပေါ် မလွှမ်းမိုး နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တကယ့် ပွဲတွေမှာ တစ်ကယ့် ပုံစံကောင်းကို ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တေ်ာတို့ လုပ်သွား ရမယ့် အရာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဆုဖလား အတွက် တိုက်ပွဲဝင် သွားရမှာပါ။ ဘာမှ အာမခံလို့ ရတာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အပြင် အခြား အသင်းတွေ ကိုလည်း အိမ်မက်မက်လို့ ရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံး အလုပ်တော့ လုပ်သွား ရမှာပါ။’ လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။
ကလော့နဲ့ လီဗာပူး အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက စွမ်းဆောင်မှုတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူ နေ၇မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒါဟာ အတိတ်က အမှတ်တရသာ ဖြစ်ပြီး အနာဂတ် အောင်မြင်မှုတွေ ရဖို့ အတွက် ဒီအပေါ်မှာ ပိတ်မိနေလို့ မရပါဘူး။
လီဗာပူးတို့ ၆ ကြိမ်မြောက် ဥရောပ ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ကလော့ က “ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အမှတ်တရ ဖြစ်ပြီး အံ့ဖွယ်ကောင်းကာ ကြီးကြယ်လှ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သမိုင်းကြောင်းပါ။ ဒါဟာ ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံး အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ ပြောင်းလဲလို့ မရတော့ ပါဘူး။ ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံး နွေရာသီလို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။
ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ခက်ခဲမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်မှုဟာ ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိထားပြီး ကိုယ်လုပ်တဲ့ အရာတွေ အလုပ် ဖြစ်တဲ့ အခါ ဒီယုံကြည်မှုကို ရပါတယ်။ မနှစ်ကတော့ အလုပ် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ကောင်လေးတွေဟာ ဒီရာသီကို မတူညီတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ စတင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုပြီး ယုံကြည် လာပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ အသင်းဟာ ဒီအပိုင်းမှာ အများကြီး တိုးတက် လာနိုင်သေးတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိနေ သေးတယ်လို့ ယူဆ နေဆဲပါ။” လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ကြားရက်က ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု တတိယမြောက် ပွဲစဉ်မှာ ဂန့် အသင်းကို ၄-၁ နဲ့ နိုင်ကာ ၃ မှတ် ရရှိ ခဲ့ပြီး ယနေ့ည မှာတော့ တော့တင်ဟမ် နဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ပွဲကျပ် ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။